Khatartu Feejignaan ma ahan ee waa Macnaha guud | Martech Zone
Isniintii, September 2, 2013 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Waxaan wareysi fantastik ah la yeelanay Mark Schaefer mowduucena ku saabsan mowqifkiisa, Sidee fiisigiska baraha bulshada u dilaya istiraatiijiyadda suuqgeyntaada. Mark wuxuu bixiyaa caddeyn ah in shirkad kasta ay tahay inay ka shaqeyso bixinta waxyaabaha cajiibka ah, qaddarro badan oo ka kooban waxyaabo qiimo leh iyo gaarsiinta waxyaabahaas meesha ay dhagaystayaashu joogaan.
Dhageyso Wareysigayaga Mark Schaefer
Qaar ka mid ah dadka waawayn waxay ugu yeeraan maadadan fudud iyo xoogaa nuggets ah. Waxaa jira qarax ka kooban mawduucan iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dhexdhexaadiyeyaasha muuqaalka sida Pinterest, Instagram iyo Vine. Marka la eego korodhkan waxyaabaha si fudud loo dheefsan karo, khuraafaadka lagu faafinaayo suuqgeynta oo dhan iyo internetka ayaa ah dareenka macaamiisha ayaa sii gaabinaaya. Hawlo badan, jeedinno, emayl, taleefan, barnaamijyo apps dhammaantood waa inay ahaadaan kuwa diiradda saaraya howlaha na horyaalla.
Waxaan wacaa BS.
Ma ahan BS talobixinta Mark, oo aan aaminsanahay inay ku taal barta. Waxaan ugu yeerayaa BS in feejignaanta celceliska ganacsiga ama macaamilku ay sii yaraanayaan. Waxaan aaminsanahay in feejignaanta iyo feejignaanta ay ka weyn tahay sidii ay ahaan jirtay. Waxaan rumeysanahay in macaamiisha ay ka faa'iideysanayaan raadinta, warbaahinta bulshada iyo aaladaha si ay u noqdaan kuwa ka waxtar badan cunista macluumaadka intii aan abid taariikhda ku jirin. Labaatan sano ka hor, maanaan helin fursad aan ku helno oo aan si qoto dheer ugu baarno iibsashadayada xigta ee ka timid calaacasha gacanta. Waxay ahayd inaan ku tiirsanaano xirfadleyaasha iibka iyo walxaha suuq geynta kaligood. Iibsashada iyo go'aannada waxaa lagu sameeyay aaminaad is gacan qaad ah mararka qaarna wax kale oo yar.
Maalmihii ol ee internetka, waxaa loo yaqaan ' macluumaadka superhighway. Sababtuna waxay ahayd mid fudud… macluumaad aad u fara badan oo laga heli karo gudaha milliseconds. Ganacsatada, tani waxay ahayd mid aad u qiimo badan. Toddobaadkan usbuucii la soo dhaafay, waa inaan u raadsadaa nidaam maamul xayeysiis cusub balooggeyga ka dib kii ugu dambeeyay ee joojiyay astaamaha muhiimka ah. Daqiiqado yar kadib, waxaan haystay liis dhamaystiran oo ah meheradaha. Saacado yar ka dib, waxaan awooday inaan baarto kuwan leh sifooyinka aan u baahnahay. Maalmo yar gudahoodna, midwalba waan tijaabiyey. Natiijadu waxay noqotay inaan helay madal leh dhamaan astaamaha aan ubaahanahay anigoon waligey cidna lahadlin ama aanan saxiixin wax qandaraas ah.
Ma jiro mashruuc kale oo aan dareenkeyga ku qabtay muddadaa. Kamaan jirin Facebook iyo Twitter. Kama jawaabi jirin taleefannada. Feejignaan gaaban Ma ahan fursad. Taasi waxay tiri, degello badan oo aan booqday ayaa iga lumay. Dukumiintiyada muuqaalka liita, fiidiyowyada muuqaalka liidashada ah, habab diiwaangelin adag, ma jiro macluumaad xiriir ah… kuwan oo dhami waxay hor istaageen awooddeyda inaan ku helo macnaha guud ee aan ugu baahnahay inaan go'aankeyga ku gaaro.
Qaar ka mid ah suuqleyda waxay u adeegsadaan diiradda iyo macnaha si khiyaano ah faa'iidadooda. Celcelis ahaan daraasad kiis, tusaale ahaan, waxay tilmaamaysaa macmiilkii lahaa natiijooyinka ugu badan ee alaabta ama adeegga la iibiyey, iska indhatira arrimaha kale ee wax ku biiriya, weligoodna ma xusin macaamiisha natiijooyinka xun leh. Natiijadu waxay tahay in macaamilka ama ganacsiga samaynaya go'aanka iibka loo daayay inay falanqeeyaan macluumaadka oo ay arkaan bal inay tahay go'aan iibsi wanaagsan.
Akhristayaasha waxaa loo daayay inay soo saaraan macnaha guud ee ku saabsan xaqiiqooyinka aad soo bandhigtay. Tani waxay u horseedi kartaa rajooyin la seegay oo laga yaabo inay soo saaraan tilmaamo aan ku habboonayn ururkaaga.
Fure u ah talada Mark halkan waa Bixinta waxyaabo la yaab leh IYO ilaalinta tayada nuxurka iyadoo ka dhigaysa mid dheef-shiidi kara. Xagjirnimada, tani waa shaqada a naqshadeeye weyn inforgraphic. Infographics aad u badan ayaa si fudud u ah tan tirakoobyo ah oo lagu garaacay sawirro wanaagsan. Laakiin qaab-dhismeedka ugu wanaagsan ayaa guud ahaan horumaraya story in sawirada iyo tirakoobka ku dhex jira taageerada.
Twitter ka soo horjeedka Blogging
Kuwo badan ayaa jeclaan lahaa inaad aamintid in tani ay tahay farqiga u dhexeeya Twitter iyo Blogging… in Twitter loogu talagalay adeegsadaha feejignaan la'aanta iyo in balooggu uu bixiyo macnaha guud ee aan u baahan nahay. Waxaan ku doodi karaa in Twitter gabi ahaanba qiimo leeyahay sababtoo ah macnaha guud ee uu abuuro. Shirkad kasta oo la siinayo, isticmaale, mowduuc, cusbooneysiin ama hashtag, Twitter wuxuu soo saaraa wada hadallo iyo xiriirinno si hufan kuu siiya macnaha guud ee aad u baahan tahay. Barnaamijyada sida Vine iyo Instagram ma laha awood ay ugu xirmaan macnaha guud ee qoto dheer - laakiin waxaan aaminsanahay inay imaaneyso (gaar ahaan markay codsadaan xayeysiin).
Ha ka walwalin feejignaanta akhristaha. Ka taxaddar inaad bixinayso qiimaha ugu weyn iyo macnaha guud ee la hagaajiyay lagana yareeyay warbaahinta ugu hufan, wax ku oolka ah, iyo tan la qaadi karo
Tags: fiiro gaar ahContent SuuqfaahfaahsanwaxtarkaKartiXoogga saarhalleeyo lillaahinimada
Yotpo: Isku-dubaridka Dib-u-eegista Bulshada ee boggaaga Ecommerce
Sep 2, 2013 at 11: 56 PM
Waa inaan hubinno in waxyaabaha naga kooban ay gaari doonaan bartilmaameedkeena bartilmaameedka iyadoo la adeegsanayo waxyaabo kala duwan
Laakiin dabcan waa inaan sidoo kale xusuusanno in haysashada waxyaabo tayo wanaagsan leh ay fure u tahay guusha ololaheena.
Sep 3, 2013 at 11: 23 PM
Waan heshiin kari waayey wax badan. Xaqiiqdii, wuxuu la yeeshay wadahadalkan maanta qof. Waxay dhaheen "fiiri sida Godin wax u qoro" taas oo aan ugu jawaabay oo aan idhi, "taasi waa sida inaad dhahdo 'fiiri sida Harvard lacag u uruuriso.'
Labaduba waa bannaanka. Adag, fikirka kicinaya, waxyaabaha xiisaha leh ayaa heli doona dareenka dadka.
Waa lagaa helay Waad ku mahadsan tahay tan. Taageeraha weyn ee Schaefer (tan iyo markii uu qoraalkiisa halkan-http: //www.businessesgrow.com/2013/04/16/three-dazzling-examples-that-turned-online-influence-into-offline-results/)
sidoo kale, markaa waxaan sugeynaa Podcast-ka evidence caddeyn dheeri ah oo ujeeddadaada ah!